लगातारको वर्षाले कुन-कुन नदिमा बढ्यो पानी, कहाँ छ खतरा ? यस्तो छ २४ घण्टे चेतावनी – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/लगातारको वर्षाले कुन-कुन नदिमा बढ्यो पानी, कहाँ छ खतरा ? यस्तो छ २४ घण्टे चेतावनी
काठमाण्डौ । लगातार दुई दिन देखि भइरहेको वर्षाका कारण देशका विभिन्न नदी र खोलामा बाढी आएको छ । लगातारको पानीले केही नदीहरुमा पानीको बहाव उल्लेख्य बढेका कारण डुवान र वाढी र खतरा बढेकोे छ । नारायणी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा कास्कीको लुम्ले र चितवनको चर्खरेमा जोखिम बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै, गण्डकी नदीमा पानीको बहाव बढ्दा म्याग्दीको घोरेपानी तथा नवलपरासीको अरुण नदी र आसपासका क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । सो क्षेत्रका बासीन्दालाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अघिल्लो वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले सतर्क अपनाउन र जोखिम न्युनिकरणका लागि तयारी गर्न समेत सावधान गराएको छ ।
गएको जेठ २८ गते मनसुन भित्रिएसँगै देशभर लगातारजसो पानी परिरहेको छ । यो हप्ता मनसुन सक्रिय भइ देशभर पानी पर्ने हुँदा बाढी र पहिरोको जोखिम रहेकाले सचेत रहन विभागले आग्रह गरेको छ । आज पनि देशका धेरै ठाउँहरुमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । प्रदेश(२, वाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेशका केही ठाउँहरुमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ । यी प्रदेशमा पर्ने नदीमा बाढी पहिरो आउनसक्ने हुँदा सतर्कता अपनाउन विभागको अनुरोध छ ।